Odayaal cafis ka helay Al-shabaab oo ku xayiran duleedka Baladxaawo…. – hareerley News
Odayaal cafis ka helay Al-shabaab oo ku xayiran duleedka Baladxaawo….
Odayaal dhaqameed ku sugan duleedka Magaalada Balad Xaawo ayaa sheegay in loo diiday in ay Magaalada galaan kaddib markii ay la soo kulmeen Al-shabaab.
Maamulka Magaalada Baladxaawo ayaa Odayaasha u diiday in ay ku soo laabtaan Magaaladaas kaddib markii ay la soo kulmeen Al-shabaab.
Odayaasha ayaa hadda ku xayiran duleedka Magaalada Baladxaawo, gaar ahaanna degaan 10km u jira Magaalada.
Odayaasha dhaqanka ee loo diiday in ay Balad xaawo galaan waxaa ka mid ah Diiriye Salaad Raagow,waxaa uu sheegay in amaankooda dartiis ay kala ula kulmeen AL-shabaab hayeeshee maamulka Baladxaawo u diiday in ay magaalada galaan.
Tiradooda ayuu ku sheegay in ay gaareyso 24 Oday dhaqameed,kuwaas oo ka baxay Balad xaawo lana soo kulmay Al-shabaab.
Al-shabaab ayaa bartamihii bishii hore Odayaashii soo xulay Golayaasha Baarlamaanka ee dowladda Soomaaliya ka dalbaday in ay is diiwaangeliyaan,waxaana meelaha qaar iska diiwaan geliyay Odayaashaas.
Maamullada Koofur Galbeed, Galmudug iyo Jubaland ayaa sheegay in ay tallaabo ka qaadayaan odayaasha aada degaannada Al-shabaab si ay isu diiwaangeliyaan.
(Xog): – Xildhibaano ka tirsan Mucaaradka oo rabo inuu soo laabto Ahmed Madoobe
Xildhibaano ka tirsan Labada Aqal ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa Kismaayo u jooga sidii ay Axmed Madoobe uga taageeri lahaayeen inuu markii saddexaad ku soo baxo doorashada Jubbaland oo la filayo in la qabto dhammaadka bishan Agoosto. Xildhibaanada ayaa durba bilaabay olole ay ku doonayaan iney ku soo saaraan Axmed Madoobe iyagoo ku xumeynaya Madaxda ugu […]
Xarakada Al shabaab Oo Xaley werar ku qaadey Saldhig Ciidanaka ku lahaayeen Ceelasha Biyaha
Dagaalamayaal ka tirsan Al-shabaab ayaa xalay waxaa ay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada xoogga ay ku leeyihiin deegaanka Ceelasha Biyaha Gobalka Shabeellada Hoose. Saldhiga la weeraray ayaa ku yaala deegaanka Arbacow oo ka tirsan ceelasha biyaha, waxaana uu dagaalka socday mudo ka badan hal saac. Inta uu dagaalka socday ayay dhinacyadii dagaalamayey waxay isku adeegsadeen […]
Al Shabaab Oo Weerarey Xaleyto Saldhig Ciidamada Milateriga Duleedka Degmada Qoryooleey
Faah faahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaal culus oo Ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya iyo ururka Al-Shabaab xalay ku dhexmaray degmada Qoryooleey ee Gobolka Shabeellaha hoose. Dagaalka ayaa yimid kadib markii Ururka Al-Shabaab ay weerareen Saldhig Ciidamo ka tirsan kuwa Millateriga Soomaaliya ay ku leeyihiin duleedka degmada Qoryooley,waxaana la sheegay in uu halkaasi […]
Hogaamiyaha Maamulka K/Galbeed oo kulan la qaatay Wasiiru-Dowlaha Britain u Qaabilsan Arrimaha Afrika oo maanta soo gaaray magaalada baydhabo:-(Sawiro)